I-genus Pakhira (i-Latin Pachira) idibanisa iindidi ezingama-24 zezityalo zentsapho ye-baobabs, okanye iibhomu (i-Bombacaceae). Ngokwe-taxonomy yesiNgesi, le nxalenye yeyelungu lemizalwane yaseMalvian.
Kwiimeko zegumbi, i-pahiri yamanzi (i-Latin Pachira aquatica), okanye okuthiwa i-Malabar chestnut, ikhulile. Esi sityalo sichazwa ngokukhula okucothayo kunye nokukwazi ukugcina amanzi emigodini phakathi kweenkuni kunye neengxolo. Ngokunyamekela kakuhle, i-aquarium inokuphumelela ukukhula kweemitha ezintathu.
I-Pahiru ikhulile isibini njengesityalo esisodwa kunye nokudala i-bonsai. Kodwa khumbula ukuba uhlangothi lukhupha indlu yezityalo i-pahir lufakela kuphela xa lufika kwisiqwenga. Kwiivenkile ungabona i-pahir kwiinqununu ezininzi, ezidibeneyo. Isityalo esinjalo sakhiwa kwiintlobo ezimbalwa, ngokukhawuleza sisebenzisana nabo beselula.
I-Pakhira yamanzi (i-Latin Pachira aquatica Aubl.). Ilizwe lalo lizityalo zaseMzantsi Melika. Ngomhlobo omangalisayo wamahlamvu, isityalo ngezinye izihlandlo sibizwa ngokuthi iMalabar okanye i-Guiana chestnut. Olunye lwamagama alo ngumthi webhotile, kuba i-pahira inokongezwa ngokuthe ngqo kwinqanaba elingaphantsi kwesiqu. Ngaphakathi kwintlambo apho amanzi agcinwa khona. Xa kunokunqongophala kwamanzi, i-pahir isebenzisa ubumanzi obuncwane, ngoko ke, ixakeka ixesha elomileyo umhlaba, kodwa ayiyikunyamezela ukutyilisa okuninzi.
I-Pakhira ikhula ngokukhawuleza, kodwa ekuhambeni kwexesha inokufikelela kwi-2.5-3 m, kwaye i-1.5 m ububanzi bayo isithsaba. Amagqabi anama-palmy-complex, eluhlaza obumnyama. Iibhulophu azifaneki. Ientyantyambo eziluhlaza okanye ezimhlophe zenza i-inflorescence enkulu kakhulu ye-panicle (malunga ne-35 cm ubude). Iintlobo - i-berry ephazamisayo, imbala yeminquma, ijikelezwe; kufinyelela kwi-10-25 cm ubude. Iimbewu zijikeleze, ziyakhiwa okanye zidliwe ziluhlaza.
Ukukhanyisa. UPahira isityalo esithanda ukukhanya okulungileyo. Ngaphandle koko, ilula kwaye ilahlekelwe ukunyaniseka kwayo. Ngokuqhelekileyo uyayinyamezela ilanga elithe ngqo kwixabiso elincinci, kodwa uthanda ukukhanya okukhanyayo. Kunconywa ukuba kukhule i pahir kwiifestile ezisempuma okanye entshonalanga. Ngasemzantsi, kufuneka umthunzi, ikakhulukazi kwiiyure ezitshisa emini. Ehlobo, kubalulekile ukubeka isityalo kwintsimi. Nangona kunjalo, kufuneka ifakwe kwindawo ekhuselekileyo emoyeni nasekukhanyeni kwelanga, ekhuselweyo kwindlapho. Ngentwasahlobo, emva kwexesha lokukhanya kwimihla emfutshane, kuyimfuneko ukuba i-pagir ibe lula ukukhanya ngokukhawuleza. Oku kuya kunceda ukukhusela ukuvela kwelanga.
Ulawulo lokushisa. I-pahiri, iqondo lokushisa elimodareyitha kwi-21-25 ° C kwixesha lehlobo lasehlotyeni libhekwa njengelungileyo. Ubushushu obuhle kakhulu ebusika ngu-14-16 ° C. Musa ukubeka esi sityalo sangaphakathi kufuphi nezixhobo zokufudumala. Musa ukuvumela iifrikhthi ukuba "zingabambeleli kubanda".
Ukunisela. Ukucetyiswa kunconywa ukuba kwenziwe ngokuhambelana nobubanzi besitya, ngelixa uphepha ukungena kwamanzi kwisiseko seentonga. Kungcono ukusebenzisa ukuthambisa okuphantsi. Isicwatshi kunye nehlobo kufuneka kusetshenziswe ngokulinganiselayo, umgca ophezulu we-substrate kufuneka wome kuze kufike ukutshiza okulandelayo. Ngethuba le-Oktobha-Februwari ukuthambisa kufuneka kuncitshiswe, kodwa ugweme ukumisa ixesha elide lomhlaba. Amanzi okunkcenkceshelwa kucetyiswa ukuma nokushisa. Xa kukho ukunqongophala kwamanzi, amaqabunga e-pahiri sag kwaye alahlekelwa ngumtsalane, kwaye ngokugqithisa kwayo iziqu ziqala ukubola.
Uthotho. Esi sibonakaliso asibalulekanga ekuhlaleni i-pahira. Isityalo ngokuqhelekileyo sithatha umoya omile egumbini. Ngakolunye uhlangothi, i-pahira iyathanda ukupomfa ngokukhawuleza ngamanzi athambileyo (amaxesha amabini ngosuku). Khumbula ukuba kunye nenqubo enjalo, i-stem yesityalo ayifanele ifumane amaninzi amaninzi, njengoko oku kuya kubangela ukubola kwayo. Ukutya okucetyiswayo ukususela ngo-Ephreli ukuya ku-Agasti isichumisi se-mineral fertilizer 1 inkcazelo kwiiveki ezi-3-4 I dose kufuneka ihanjiswe ngokweengcebiso zomenzi.
Ukuqulunqwa kunye nokufakelwa. Isityalo sakhiwa ngokunyunyuza amasebe esonge phezulu. Kwinqanaba lokukhupha, i-pahira iqalisa ukufaka isalathisi, yenze isithsaba esinyeneyo. Ngokuqhelekileyo kunikwa i-oval okanye i-spheric shape.
I-pahir yokutshintsha kufuneka ibe entwasahlobo: ekuncinci iminyaka yonke, izityalo zabantu abadala - minyaka yonke 2-3. Ibhodlela lokutshintshwa kufuneka lisetyenziswe elincinci, elibanzi, ububanzi obukhulu kunelo elidlulileyo ngo-4-5 cm. Musa ukubeka i-pahir kwisitya esinzulu, ekubeni iingcambu zayo zisekufuphi. Kwiindimbi ezinzulu isityalo sivakalelwa, sigula, sikhula ngokukhawuleza.
I-substrate isetyenziswe kwiphepha, i-turf kunye nesihlabathi ngokulinganayo. Yongeza kuyo itena kunye nelahle. Iimveliso zorhwebo zivame ukusebenzisa i-primer yendalo yonke yemithi kunye nemithi yesundu. Qinisekisa ukwenza imithombo emihle.
Ukuzaliswa. Isityalo se-pahir sizalisa imbewu (ekuqaleni kwentwasahlobo) okanye i-vegetatively (cuttings, ngo-Agasti). Xa zisasazwa ngembewu, kubalulekile ukusebenzisa ukufudumala komhlaba, ukubeka ubushushu kwi-25-27 ° C. Imbewu emitsha kufuneka ityalwe, kuba ixesha lilahlekelwa ukuhluma. Imbewu igalelwe kuqala kwisitya, phantse ngaphandle kokugubungela umhlaba, ufefe ngamanzi afudumele. Iplank kufuneka igubuzwe ngeglasi okanye ipakethi kwaye ihlale ikhupha, isuse ama-drop drops. Izithombo zivela kwiiveki ezintathu.
Ukusikwa kungasasazeka ngokutshiza. Sika ii-cuttings ngokuqinisekileyo ngesithende. Kungcono ukwenza oku ngasekupheleni kwehlobo. Ukuhluthwa kwe-cuttings kudinga ukushisa kunye nokuphakama okukhulu.
Ukuba i-trunk kunye neengcambu ziqala ukubola, ke ukuthambisa i-pahiri ininzi okanye amanzi awela kwisiqhamo sesityalo.
Ukuba iigqeba kunye neengcebiso zamaqabunga ziguqulwa, ke igumbi lomoya omile kakhulu. Ezinye izizathu: ulungelelaniso, ukutyiliswa okwaneleyo.
Ukuba amaqabunga e-curl, athobile, amabhonkqo avela emdaka, oku kuthetha ukuba ukushisa eklasini kuncinci kwi-pahira.
Esinye isizathu sinokubakho ukushisa kwantyantya emini imini nobusuku.
Ukuba isiqendu solule, kwaye uphawu lwe "bhotile" lufihlakele, lithetha ukuba isityalo asikhanyanga ngokwaneleyo okanye sibekwe kude kwiwindow.
Ukuba kukho iindawo eziqaqambileyo, ezomileyo kumaqabunga, ukukhanya kukhanya kakhulu, okukhokelela ekutshweni kwelanga. Kufuneka kube yi-pahiru emthunzini.
Izilwanyana: i-scab, isicabha.
Ukulinywa kwekhalenda ka-Januwari 2018 kwitheyibhile: kubalimi, iilori kunye nabavelisi beentyatyambo
I-Colorado ye-potato beetle - indlela yokulwa kunye nento yokucwangcisa, iifoto, ividyo
Iindlu zeNdlu ezingenakugcinwa kwigumbi
Ziziphi izakhiwo ezingenakugcinwa ekhaya?
Izityalo ezingaphakathi: gusmania
Sikhula sikhula kwisicwangciso sobuqu
Iindaba ezimabonakaliso zixeliwe ngokukhulelwa kukaPelagia
Izindlela zokulwa nemikhwa emibi
Amaqanda aphekiweyo kunye ne-ricotta
ULagerfeld noAlice: iqoqo leFendi S / S 2016